I-Antibiotic Bayer Avelox > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Avelox® (400 mg) Moxifloxacin
I-Avelox ngabelwa yona ngudokotela wezifo zabesifazane, ngakho-ke amadoda angcono kakhulu kukho konke okubhaliwe ngezansi, kungcono ukungafundi.
Eminyakeni emibili edlule, sengibhale ukubuyekezwa ngesihloko "ngine-smear embi"ngakho-ke ngabelwa:
Ngemuva kwalokho kwadingeka ngihlupheke: ukwelashwa akuzange kunikeze imiphumela ngokushesha. Futhi kulokhu bekucishe kufane.
Angazi ukuthi kwenzekani ngomzimba wami, kepha inkinga nge-smear embi ngamaseli egazi amhlophe aphakanyisiwe -
ungivakashele futhi kulo nyaka. Futhi kwabonakala kungekho okulimazayo, kwakukhona ukungaphatheki kahle okuthile, okuvame ukwenzeka ezimweni ezinjalo.
Ngokuvamile, ngingumvakashi ojwayelekile kwi-gynecology: iskena se-ultrasound izikhathi ezi-2 ngonyaka nokubonisana okuphoqelekile kwe-gynecologist-endocrinologist. Iqiniso ngukuthi ukuxilongwa kwami ​​isikhathi eside i-endometrial hyperplasia.
Muva nje, ngithole ukuthi yi-endometrial hyperplasia engavusa igxuma kuma-leukocytes ku-smear - ngoba ukugxila kokuvuvukala kwe-endometrium kuhlala kuhlale kusibeletho.
Udokotela waphikelela futhi ukuthi enze i-hysteroscopy, kepha ukuhlolwa "okuhle" kuyadingeka kule nqubo. Ukuze ngikwenze lokhu, ngabekwa amakhandlela kuqala, kwathi lapho ngivakashela udokotela futhi, i-antibiotic.
Udokotela we-gynecologist wanquma amakhandlela we-Fluomizinum kuqala.
Kepha ukwelashwa kwabo, noma bekuyinto enhle, akuzange kube ngcono imiphumela ye-smear, - ngokusho kukadokotela, waba mubi ngokwedlulele.
Njengodokotela we-gynecologist, angazi ukuthi wayeqondiswe ini - phela, angizange ngibe nokulimazeka ngenxa ye-ultrasound - wayala umuthi olwa namagciwane wesizukulwane esisha esiqine kakhulu - i-Avelox.
Ukuqinisekisa futhi ukuthi "uzosiza zisuka nje!", ngaphezu kwalokho bangibhalela eminye imidakamizwa eminingi engavimbela ukuvela kwe-dysbiosis ne-thrush.
Ngokuvamile, ukwelashwa kwami ​​kwahamba nesenti!
Ngaphambi kokuthatha avelox Mina, njengenjwayelo, ngifunde ukubuyekezwa, okuvela lapho kwacaca ukuthi umzimba wami awukwazi ukukudlulisa i-Avelox, ngoba nginezinkinga ngesinye isinye, nokuthilokhu kushocishe zonke izifo ziyasiza.
Ngathatha ithebhulethi le-Avelox 1 ngosuku ngemuva kokudla, ngagezwa ngamanzi amasonto amabili.
Ngazama ukungashintshi isikhathi sokudla ukuze kungabikho umthwalo ongadingekile emzimbeni.
Izifo ezithathelanayo nezivuvukayo kubantu abadala ezibangelwa ama-microorganisms azwela umuthi: i-acus sinusitis, i-pneumonia etholwa ngumphakathi (kufaka phakathi lezo ezibangelwa izingqinamba ze-microorganism ezinama-antiotic amaningi aphikisayo), ukuqina kwe-bronchitis engapheli, ukutheleleka okulula kwesikhumba nezicubu ezithambile, izifo eziyinkimbinkimbi zesikhumba nokuthambekela takhiwo (kufaka nonyawo lwesifo sikashukela), izifo eziyinkimbinkimbi ezithinta isisu, kubandakanya izifo ze-polymicrobial ama-intraperitoneal abscesses, izifo ezilula zokuvuvukala zezitho zomzimba we-pelvic (kufaka phakathi i-salpingitis ne-endometritis).
ukukhulelwa, ukukhulelwa (ukuncelisa),
izingane nentsha engaphansi kweminyaka engu-18,
I-hypersensitivity to moxifloxacin kanye nezinye izingxenye zomuthi.
Ukuqedwa kwesikhawu se-QT (kwesinye isikhathi ezigulini ezine-hypokalemia eyenzeka njalo, kwesinye isikhathi kwezinye iziguli), i-tachycardia ne-vasodilation (ukufiphalisa ubuso), i-hypotension ye-arterial, i-hypertension ye-arterial, i-failing, i-cyricular tachyarrhythmias, i-nonspecific arrhythmias (kufaka phakathi i-extrasystole) (i-ventricular pirouette uhlobo arrhythmia) noma ukuboshwa kwenhliziyo ikakhulu kubantu abanezimiso ezibeka engxenyeni efana ne-bradycardia ebaluleke kakhulu emtholampilo, ischemia esibuhlungu yomoya, ukufushane komoya, kufaka phakathi i-ac izibalo, isicanucanu, ukuhlanza, ubuhlungu besisu, uhudo, i-anorexia, ukuqunjelwa, idyspepsia, i-flatulence, i-gastroenteritis (ngaphandle kwe-gastroenteritis erosive), i-stomatitis, i-pseudomembranous colitis (ezimweni ezivamile kakhulu ezihambisana nezinkinga ezisongela impilo), i-jaundice, i-hepatitis (ikakhulukazi i-cholestate ), isiyezi, ikhanda, ukudideka, ukudideka, ukozela, ukwethuka, ukuphazamiseka kokulala, ukukhathazeka, ukwanda komsebenzi we-psychomotor, ukuhlangana okungahambi kahle (kufaka phakathi ukuphazamiseka kwe-gait ngenxa yesiyezi Mina, ezimweni ezingandile kakhulu, okuholela ekulimaleni ngenxa yokuwa, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile), ukubanjwa okukhanyayo ngezibonakaliso ezahlukahlukene zokwelapha (kufaka phakathi ukubanjwa ngamandla kwe-mal mal, ukunakwa okungahambi kahle, ukuphazamiseka kokukhuluma, i-amnesia, ukudangala (ezimweni ezingavamile kakhulu, ukuziphatha okunomkhuba wokuzilimaza kungenzeka), ukubona izinto ezingekho emzimbeni, ukuvezwa kwengqondo (okungenzeka kuboniswe ekuziphatheni ngokuthambekela kokuzilimaza), ukuphazamiseka kokunambitha, ukuphazamiseka okubukwayo (ukufiphala, ukwehla kokubona okubonakalayo, idiplopia, ikakhulukazi ehlanganiswa nesiyezi nokudideka), i-tinnitus, ukwephula iphunga, kufaka phakathi i-anosmia, ukulahleka kokuzwa kokunambitha, i-anemia, i-leukopenia (kufaka phakathi i-neutropenia), i-thrombosis i-cytopenia, i-thrombocytosis, isikhathi eside i-prothrombin futhi sinciphile i-INR, i-arthralgia, i-myalgia, i-tendonitis, ithoni yomsipha ekhuphukayo kanye nokugabha, ukuphakama kwe-tendon, i-realinfection, i-vaginitis, ukuphuma komzimba (okubangelwa ukuhanjiswa yisisu noma ukuncipha kokudla okungamanzi), ukuhluleka kwe-renal , okungaholela ekulimaleni kwezinso (ikakhulukazi ezigulini esezikhulile ezinokulimazeka kokuqina kwezinzwa), ukushuba kwesikhumba se-inkunzi, isibonelo, iStevens-Johnson syndrome noma ubuthi i-epidermal necrolysis (okungenzeka ibe yingozi empilweni), i-urticaria, pruritus, ukushesha, ukusabela kwe-anaphylactic / anaphylactoid, i-angioedema, kufaka phakathi i-laryngeal edema (okungenzeka isongele impilo), ukushaqeka kwe-anaphylactic (kufaka phakathi okusongela impilo), i-malaise ejwayelekile (kufaka phakathi nezimpawu zempilo engeyinhle, izinhlungu nokujuluka), ukudumba.
Into esebenzayo: moxifloxacin hydrochloride - 436.8 mg
Amathebulethi, njengoba ubona, mikhulu kunalokho, kodwa ngenxa yesimo sabo esiphakeme badakiwe ngokwejwayelekile.
akinto esebenzayo - moxifloxacin hydrochloride 436.8 mg,
(okulingana ne-moxifloxacin 400.0 mg),
ababukeli: i-lactose monohydrate, i-microcrystalline cellulose, i-croscarmellose sodium, i-magnesium stearate,
Ukwakhiwa kwegobolondo: i-iron oxide ebomvu, i-hypromellose, i-macrogol 4000, i-titanium dioxide.
Amacwecwe abomvu abomvu ka-Oblong, enziwe embozwe, acishe abe ngu-17 mm ubude futhi acishe abe ngu-7 mm ububanzi, amakwe "M 400" ngakolunye uhlangothi athi "BAYER" ngakolunye.
Ukuqalwa kanye bioavailability
Lapho uthathwa ngomlomo, i-moxifloxacin idonswa ngokushesha futhi icishe ngokuphelele. I-bioavailability eyi-Absolute cishe i-91%.
I-pharmacokinetics ye-moxifloxacin lapho ithathwa ngomuthi ka-50 kuya ku-1200 mg kanye, kanye no-600 mg / usuku izinsuku eziyi-10, iqondile. Isimo sokulingana sitholakala kungakapheli izinsuku ezintathu.
Ngemuva komthamo owodwa wama-400 mg we-moxifloxacin, inani eliphakeme kakhulu (C max) egazini lifinyelelwa kungakapheli amahora angama-0.5-4 futhi lingu-3.1 mg / l. Ukugxila kwe-plasma okuyisilinganiso esiphansi esimweni esizinzileyo (400 mg kanye ngosuku) kwakuyi-3.2 no-0.6 mg / L, ngokulandelana.
Lapho uthatha i-moxifloxacin ngokudla, kukhona ukwanda okuncane kwesikhathi sokufika ku-Cmax (ngamahora ama-2) kanye nokwehla okuncane kwe-Cmax (cishe yi-16%), ngenkathi isikhathi sokufakwa emzimbeni asishintshi. Kodwa-ke, le datha ayinakubaluleka komtholampilo, ngoba isilinganiso se-AUC / MIC sibikezela kakhulu umsebenzi we-antimicrobial wama-quinolones. Ngakho-ke, lesi sidakamizwa singasetshenziswa noma ngabe sithathwa kanjani ukudla.
I-Moxifloxacin isatshalaliswa ngokushesha kakhulu embhedeni ongajwayelekile. Kunendawo enkulu engaphansi kwe-AUC pharmacokinetic curve (AUCnorm = 6 kg * amahora / L) ngevolumu yokusabalalisa ngokulingana (Vss) ye-moxifloxacin ecishe ibe ngu-2 L / kg. Inani eliphakeme kakhulu le-moxifloxacin emathekeni liphakeme kakhulu kunakwe-plasma. Ezifundweni ze-in vitro nase-vivo kuhlu lokuhlushwa kusuka ku-0,02 kuya ku-2 ml / l, ukubopha kwe-moxifloxacin kumaphrotheni kwakungu-45%, kungakhathalekile ukuthi bekuhlangene umuthi kangakanani.
I-Moxifloxacin ihlanganiswa kakhulu ne-albhamu ye-plasma.
Kukhona inani eliphakeme lokuhlushwa kwamahhala> 10xMIC ngenxa yevolumu ephansi.
Ukugxila okuphezulu komuthi, okwedlula lokho okuku-plasma, kwakheka izicubu zamaphaphu (uketshezi lwe-epithelial, macrophages we-alveolar, izicubu zezinto eziphilayo), kuma-sinuses nama-polyps, ekugxilweni kokuvuvukala. Emathebeni, uketshezi olungena phakathi nendawo (oluzungeza umzimba futhi olufudumezayo), kutholakala umuthi ophakeme wesimo esimweni esikhululekile.
Ngaphezu kwalokho, ukujula okuphezulu komuthi kunqunywa kuzitho zesisu esisesiswini kanye noketshezi lwesitho sangasese sowesifazane, kanye nasezithweni zangasese zowesifazane.
Ngemuva komthamo owodwa we-moxifloxacin 400 mg, kuzo zombili izindlela zokuphatha, ukuqondiswa okuphezulu okuqhathanisayo kwaqhathaniswa kuqhathaniswa nokuqina kwe-plasma kwezicubu ezahlukahlukene ezihlosiwe.
Ngemuva kokudlula esigabeni sesi-2 se-biotransformation, i-moxifloxacin ikhishwa emzimbeni yizinso nezinsana (i-GIT) zombili ezingashintshiwe nangezindlela zokungasebenzi kwe-sulfo compounds (M1) ne-glucuronides (M2). Lawa ma-metabolites asebenza kuphela emzimbeni womuntu futhi awunawo umsebenzi we-antimicrobial. Ucwaningo lokusebenzelana kwe-metabolic pharmacokinetic nezinye izidakamizwa kukhombisile ukuthi i-moxifloxacin ayihlanganisiwe yi-microsomal cytochrome P450 system.
Kungakhathaleki ukuthi iyiphi indlela yokufaka isicelo, ama-metabolites M1 kanye no-M2 atholakala ku-plasma wegazi endaweni okuhlushwa ngaphansi kakhulu kunaleyo yama-moxifloxacin angaguqukiyo.
Ukuphila kwesigamu umuthi kusuka ku-plasma cishe amahora ayi-12. Ukukhishwa okuyisilinganiso okuphelele ngemuva kokuthatha umthamo we-400 mg kusuka ku-179 kuye ku-246 ml / min. Ukukhishwa kwezitho zomzimba okucishe kufinyelele ku-24-53 ml / min kwenzeka ngokubuyiselwa okuyingxenye kweshubhu kwezinso. Ukusetshenziswa okuhlangene kwe-ranitidine ne-phenenecid akukuthinti ukuvama kwomuthi umuthi. Kungakhathalekile ukuthi iyiphi indlela yokuphatha, i-moxifloxacin esetshenziswayo cishe icishe ibe ngama-96-98% okulinganiselwa kuma-metabolites esigaba sesibili se-metabolism ngaphandle kwezimpawu ze-oxidative metabolism.
Ama-Pharmacokinetics emaqenjini ahlukahlukene eziguli
Umehluko kuma-pharmacokinetics we-moxifloxacin awakasungulwa.
UPaul Ukungezwani (33%) kuma-pharmacokinetics (AUC, Cmax) phakathi kwabesilisa nabesifazane kwembulwa. Umehluko owembuliwe ku-AUC naku-Cmax wachazwa ngomehluko isisindo somzimba kunobulili. Ngakho-ke, azibalulekile ngokwezifo.
Ukwahluka okungenzeka kwe -echithnic kwafundwa eCaucasoid, eJapan, eNegroid, nakwezinye izinhlanga. Ukwehluka okubalulekile emtholampilo kwe-moxifloxacin akukasungulwa.
I-pharmacokinetics ye-moxifloxacin ezinganeni ayifundwanga.
Akukho zinguquko ezinkulu kwi-pharmacokinetics ye-moxifloxacin ezigulini ezinomsebenzi we-renal ophazamisekile (kufaka phakathi iziguli ezinqunyelwe i-creatinine ye-1/100 ne-1/1000 ne-1/10 000 ne-1 / 1,000)
- Ushintsho ekuhlushwa kwe-thromboplastin
- ukusabela kwe-anaphylactic / anaphylactoid, i-allergic / angioedema, kufaka phakathi i-edema ye-laryngeal
-ukusebenza okungokomzwelo, ukucindezelwa (ezimweni ezingavamile kakhulu, kubonakaliswa ngokuziphatha kuthambekele kokuzilimaza, njengokucabanga kokuzibulala noma imizamo), ukubona izinto ezingekho emthethweni
- I-hyposthesia, ukwephula iphunga, kufaka phakathi i-anosmia
- Amaphupho we-pathological, ukuhlangana okungahambi kahle (kufaka phakathi i-gait eyalimala, ikakhulukazi ngenxa yesiyezi noma i-vertigo (okuholela ekulimaleni kokulimala, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile ezimweni ezingatheni kakhulu), ukuquleka okubonakaliswa okuhlukahlukene kokwelashwa (kufaka phakathi okwenziwe ngokubanzi), ukunakwa okungahambi kahle, izinkinga zokukhuluma, i-amnesia
- i-neuropathy ye-peripheral ne-polyneuropathy
- i-tinnitus, ukuthikamezwa kwezindlebe, kufaka phakathi isithulu (kuvame ukuguqulwa)
- ukuquleka, hypotension, umfutho wegazi ophakeme, i-tachyarrhythmias ye-ventricular
- dysphagia, stomatitis, i-pseudomembranous colitis (ehlotshaniswa nezinkinga ezisongela impilo ezimweni ezingatheni), i-jaundice, i-hepatitis (ikakhulukazi i-cholestatic)
- I-tendonitis, ithoni yemisipha ekhuphukayo kanye nokuncipha kwemisipha, ubuthakathaka bemisipha
- Umsebenzi we-renal okhubazekile, ukwehluleka kwe-renal (ngenxa yokuphelelwa ngamandla, ikakhulukazi ezigulini esezikhulile ezinokulimazeka kwe-renal)
I-Avelox iyatholakala ngesimo samacwecwe ahlanganisiwe nesisombululo sokufakwa.
Into esebenzayo yi-moxifloxacin: kuthebhulethi eyi-1 ne-250 ml yesisombululo - 400 mg.
Abafaka kumathebhulethi: i-lactose monohydrate, i-microcrystalline cellulose, i-croscarmellose sodium, i-magnesium stearate, hypromellose, oxide iron iron, macrogol 4000, titanium dioxide.
Izici ezisizayo zesixazululo: I-1M hydrochloric acid, i-sodium chloride, isisombululo se-2M sodium hydroxide, amanzi omjovo.
I-Moxifloxacin (igama lamakhemikhali - 8-methoxyfluoroquinolone) i-ejenti ebanzi ye-bactericidal antibacterial agent. Umphumela wayo we-bactericidal kungenxa yokuthi i-inhibitor ye-topoisomerases yesi-II ne-IV. Lokhu kudala ukuphazamiseka ezinqubweni zokuqoshwa, ukulungiswa nokuphindwaphindwa kwe-biosynthesis ye-DNA yamangqamuzana amancane, futhi ngenxa yalokho, kuholela ekufeni kwalaba bantu.
Ukugxila okuncane kwe-bactericidal kwe-moxifloxacin ngokuvamile kuqhathaniswa nokugxila okuncane kokuvinjelwa. Umsebenzi we-antibacterial we-Avelox awunqunywa izindlela ezivusa ukuthuthukiswa kokumelana kwama-tetracyclines, ama-penicillin, ama-macrolides, ama-aminoglycosides nama-cephalosporins. Ukuphikiswa kokunqamula phakathi kwalawa maqembu emishanguzo ye-antibacterial kanye ne-moxifloxacin ayitholakalanga. Amacala okumelana ne-plasmid okwamanje awabhaliswa. Ukuvama okujwayelekile kokuvela kokumelana kuncane kakhulu (10 -7 ‒10 -10).
Ukumelana ne-Avelox kuthatha isikhathi eside ngokusebenzisa izinguquko eziningi.
Ukuchayeka okuphindaphindwayo kwengxenye esebenzayo ye-Avelox ekugxiliseni okungafinyeleli inani lenani eliphansi le-inhibitory okuhlushwa (i-MIC), kuholela ekwandeni okuncane kwe-MIC.
Kunezimo zokunqaba kwe-crossin kuma-quinolones. Kodwa-ke, amanye ama-microorganism ama-anaerobic ne-gram-positive amelana namanye ama-quinolones akhombisa ukuzwela ku-moxifloxacin.
Kwasungulwa ukuthi ukungezwa kweqembu le-methoxy elenziwe endaweni engu-C8 esakhiweni se-moxifloxacin kukhulisa umsebenzi walo futhi kuvimbele ukwakheka kwama-bacterium aguqukayo wegciwane elinamandla.
Ukungezwa kweqembu le-bikcloamine ku-molecule esesikhundleni C7 kuvimbela ukwakheka kwe-efflux esebenzayo kanye nendlela yokumelana ne-fluoroquinolones.
I-in vitro moxifloxacin isebenza ngokulwa namagciwane anezinhlaka ezingejwayelekile ze-gram-positive ne-gram-negative, i-anaerobes, i-atypical kanye ne-acid emelana ne-acid (isb. I-legionella spp.
Okwamanje, kucwaningwe izifundo ezimbili namavolontiya lapho kwenziwa khona izinguquko ku-microflora yamathumbu ngemuva kokufundwa kokuphathwa kwe-moxifloxacin. Babonisa ukwehla kokugxila kwe-Klebsiella spp., I-Escherichia coli, i-Enterococcus spp., Ama-bacteriides vulgates, i-Bacillus spp., Kanye ne-anaerobes Peptostreptococcus spp., I-Eubacterium spp., Bifidobacterium spp. Lezi zinguquko bezihlehliselwa amaviki amabili. I-Clostridium ubunzima eyingozi ayikhonjwanga.
I-in vitro moxifloxacin ikhombisa umsebenzi ophakeme we-antibacterial ngokumelene nama-microorganisms alandelayo:
Amagciwane a-gram-positive: Ama-Gardnerella vaginalis, ama-methicillin-sensitive ama-coagulase-negative staphylococci (S. simulans, S. cohnii, S. saprophyticus, S. epidermidis, uS.i-hominis, S. haemolyticus), iStaphylococcus aureus (izingqinamba ezibonisa ukuzwela ku-methicillin), i-Streptococcus pneumoniae kufaka phakathi izingqinamba ezingamelana ne-penicillin, kanye nobunzima bokulwa namagciwane amaningi, kanye nobunzima obuhlangabezana nemithi elwa namagciwane amabili noma ngaphezulu, okubandakanya trimethoprim / sulfamethoxazole, i-penicillin (i-MIC engaphezu kwe-2 ,g / ml), ama-tetracyclines, ama-cephalosporins wesizukulwane sesibili (isb. cefuroxime), ama-macrolides, ama-Streptococcus dysgalactiae, ama-Streptococcus agalactiae, Streptococcus phasparata stiaidasioidioidrate. , S. thermophilus, S. mutans, S. sa livarius, S. sanguinis, S. mitis), iqembu le-Streptococcus milleri (S. intermedins, S. constellatus, S. anginosus),
amagciwane angenawo amandla agcwele i-gram-negative: Proteus vulgaris, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus influenzae (kufaka phakathi izingqimba ezihlanganisa futhi zingahlanganisi ama-act-lactamases), Acinetobacter baumannii, Moraxella catarrhalis (kufaka phakathi izingqimba ezikhiqiza futhi ezingakhiqizi i-β-lactamases, Bordella pneumonia, Bordella pneumonia.
Ama-anaerobic microorganisms: Propionibacterium spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp.,
ama-atypical microorganisms: Coxiella burnetii, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Mycoplasma pneumoniae.
La ma-microorganisms alandelayo azwela ngokulinganisela i-moxifloxacin:
Amagciwane anegram-positive: i-Enterococcus faecium, i-Enterococcus avium, i-Enterococcus faecalis (kuphela izinto ezithinta i-glamicin ne-vancomycin),
amagciwane angasebenzisi gram: Providencia spp. (P. stuartii, P. rettgeri), Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Enterobacter spp. (U-E. sakazakii, u-E. intermedius, u-E. aerogene), u-Enterobacter cloacae, u-Stenotrophomonas maltophilia, uBurkholderia cepacia, uPseudomonas fluorescens, ama-Summiter Pantoea,
Ama-anaerobic microorganisms: Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp. (B. vulgaris, B. fragilis, B. uniformis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron).
Ama -organices alandelayo abonisa ukumelana nomuthi:
amagciwane anegram-positive: ama-methagillin-immune staphylococci (S. simulans, S. cohnii, S. saprophyticus, S. pesermidis, S. Hominis, S. haemolyticus), ofloxacin / methicillin-athintekayo emithini ka-Staphylococcus aureus,
amagciwane angasebenzisi gram: Pseudomonas aeruginosa.
Ukusetshenziswa kwe-Avelox akukhuthaziwe ekwelashweni kwezifo ezibangelwa amagciwane eStaphylococcus aureus ngokumelana okuqinisekisiwe kwe-methicillin (MRSA). Uma kwenzeka kungenwa izifo ezitholakele noma ezifakazelwe ngumtholampilo ezibangelwa yi-MRSA, ukwelashwa ngemithi efanele i-antibacterial kufanele kunqunywe.
Kwezinkinga ezithile, ukumelana okutholakele kungasakazeka ngokuhlukile ngokuhamba kwesikhathi ngokuya ngendawo yeziguli. Ngalesi sizathu, lapho kuhlolwa ukuzwela kokuqina, kunconyelwa ukutadisha imininingwane yendawo mayelana nokumelana, ikakhulukazi ekwelapheni izifo ezithathelwanayo ezinzima.
Uma ezigulini zilashwa esibhedlela, inani lendawo elingaphansi kwe-pharmacokinetic ijika "okuhlushwa - isikhathi" (AUC) / MIC90 ingaphezu kwe-125, futhi okuqukethwe okuphezulu kwe-moxifloxacin ku-plasma yegazi (Cmax) / MIC90 isebangeni le-8-10, lokhu kusho ukuhlephula kahle isimo kanye nokwenza ngcono kwezempilo kwesiguli. Ngokukhipha isikhathi, lezi zinkomba zivame ukuba ngaphansi (AUC / MIC90 idlula ku-30- 40).
Lapho uthatha indlela yomlomo ye-Avelox: nge-MIC ephakathi90 I-0.125 mg / ml AUIC (indawo engaphansi kwekhola ye-inhibitory, i.e. ratio ye-AUC / MIC90) ilingana no-279, no-Cmax/ IMIC90 - 23.6. Ngamanani we-MIC90 Amanani we-0.25 mg / ml kanye nama-0.5 mg / ml AUIC nama-C amananimax/ IMIC90 ngokulandelana bangu-140 no-11,8 ecaleni lokuqala nabangu-70 no-5.9 ecaleni lesibili.
Ngokufakwa kwe-intravenous: nge-MIC ephakathi90 I-0.125 mg / ml AUIC ingu-313 no-Cmax/ IMIC90 - 32,5. Ngamanani we-MIC90 Amanani we-0.25 mg / ml kanye nama-0.5 mg / ml AUIC nama-C amananimax/ IMIC90 ngokulandelana bangu-156 no-16.2 ecaleni lokuqala kanti angama-78 no-8.1 kuleli cala lesibili.
Lapho uthatha i-Avelox ngaphakathi, i-moxifloxacin igxwa ngesivinini esiphezulu futhi icishe ngokuphelele. I-bioavailability yayo ephelele icishe ibe ngu-91%. Kufakazelwe ukuthi i-pharmacokinetics yale nto ngethamo elilodwa ebangeni le-50-1200 mg, kanye nangemthamo we-Avelox kwithomu lansuku zonke le-600 mg yezinsuku eziyi-10, lilayini. Isimo sokulingana sisungulwa kungakapheli izinsuku ezintathu.
Ngemuva komthamo owodwa we-400 mg we-Avelox, ukuqina okuphezulu egazini kutholakala emahoreni angama-0.5-4 futhi kungama-3.1 mg / l. Ngokuphathwa ngomlomo kwe-400 mg yesidakamizwa kanye ngosuku, ukujula okuphelele nokuncane kokuma kwento esegazini kungu-3.2 mg / L no-0.6 mg / L ngokulandelana. Lapho i-moxifloxacin ingena ngaphakathi nokudla, kukhona ukwanda okungabalulekile esikhathini sokufinyelela kokuhlushwa okuphezulu (cishe amahora angama-2) kanye nokwehla okungenakubalwa kokuhlushwa okuphezulu (cishe i-16%). Kulokhu, isikhathi sokufakwa kwesinye isikhathi sihlala singashintshiwe. Kodwa-ke, le datha ayinakho ukubaluleka okuthile ngokomtholampilo, ngakho-ke i-Avelox ivunyelwe ukufaka isicelo kungakhathalekile ukuthathwa kokudla.
Ngemuva kokumiliselwa okukodwa kwe-Avelox ngethamo lama-400 mg ngehora eli-1, inani eliphakeme lezinto lifinyelelwa ekugcineni kokufakwa futhi licishe libe yi-4.1 mg / l, elihambisana nokwanda cishe kwe-26% uma kuqhathaniswa nenani lalesi paramenti ngokuphathwa komlomo kwe-moxifloxacin.
Ukudalulwa kwe-moxifloxacin, okunqunywa yinkomba ye-AUC, kweqe kancane lokho ukuphathwa komlomo kwe-moxifloxacin. I-bioavailability eyi-Absolute cishe i-91%. Ngemuva kokuphindaphindwa kwe-infusions kwangaphakathi kwe-Avelox ngethamo lama-400 mg elihlala ihora eli-1 ngosuku, inani lokugcina nokujula lokuma kwe-moxifloxacin egazini liyahlukahluka ebangeni le-4.1-5.9 mg / l no-0.43-0.84 mg / l, ngokulandelana. Isilinganiso sokuqina esimaphakathi se-4.4 mg / L siyatholakala ekugcineni kokufakwa.
Umuthi usatshalaliswa ngokushesha kwizitho nezicubu. Izinga layo lokubopha amaprotheni egazi (ikakhulukazi i-albhamuin) cishe lingama-45%. Umthamo wokusabalalisa ufinyelela cishe ku-2 l / kg.
Ukugxila okubalulekile kwe-moxifloxacin, edlula leyo eku-plasma yegazi, kuqoshwa kuma-incli (ama-blister okuqukethwe uma kunesilonda sesikhumba), izicubu zamaphaphu (kufaka phakathi i-alveolar macrophages kanye noketshezi lwe-epithelial), ama-polyps asemakhaleni kanye nezono (i-ethmoid ne-maxillary sinuses). Emathekwini amathe nasemanzini, isakhi esisebenzayo se-Avelox sinqunywa ngesimo sayo samahhala (ngaphandle kokubopha amaprotheni) nasekugxileni okuphezulu kune-plasma yegazi. Futhi, izinga eliphakeme le-moxifloxacin litholakala ezithweni zangasese sowesifazane, uketshezi olungamathambo kanye nezicubu zezitho zesisu.
I-Moxifloxacin ibandakanyeka ezinqubweni ze-biotransformation zesigaba sesibili futhi ikhishwa emzimbeni nomchamo kanye nendle. Ngaphezu kwalokho, itholakala zombili ngendlela engashintshiwe nangendlela yokuhlanganiswa kwe-sulfo complements (M1) ne-glucuronides (M2), engenawo umsebenzi we-pharmacological.
Umuthi awubandakanyeki ekuphendukeni kwe-biochemical ngenxa yokuvezwa kohlelo lwe-microsomal lwe-cytochrome P450. Ukugxila kwe-Plasma kwe-M1 ne-M2 metabolites kuphansi kunaleyo eyakhe abazali. Imiphumela yezifundo ezenziwa ngaphambi kwesikhathi ikhombisa ukuthi akukho miphumela emibi yalawa ma-metabolites emzimbeni ngokuya kwawo nokubekezelela nokuphepha.
Ukuphila kwengxenye kwe-moxifloxacin cishe amahora ayi-12. Ngokwesilinganiso, imvume ephelele ngemuva kokuphathwa komuthi ku-400 mg ngu-179-246 l / min. Ukuqashwa kabusha kweRenal kufinyelela ku-24-55 ml / min. Lokhu kufakazela ukubuyiselwa okuyingxenye kweshubhu kwento.
I-boima esele ye-moxifloxacin ne-phase 2 metabolites icishe ibe yi-96-98%, okufakazela ukungabikho kwe-oxidative metabolism. Cishe ama-22% womthamo owodwa we-Avelox (400 mg) udalulwa ungashintshiwe emchameni, futhi cishe ungama-26% ngamagundane.
Lapho ufunda i-pharmacokinetics ye-moxifloxacin ezigulini zowesilisa nabesifazane, i-AUC nokugxila okuphezulu kwehluka cishe ngama-33%. Ukufakwa kwento akuncikile ebulilini. Umehluko ku-AUC nokugxila okukhulu kungenzeka kakhulu ngenxa yokuhluka kwesisindo somzimba, hhayi ubulili, futhi akunakubaluleka okuthile kliniki.
Umehluko obalulekile kuma-pharmacokinetics we-moxifloxacin ezigulini zeminyaka ehlukene futhi ongowezinhlanga ezihlukile awukhonjwa. I-pharmacokinetics ye-moxifloxacin ezinganeni okwamanje ayiqondakali kahle.
Ezigulini ezibanjwa yi-peritoneal dialysis yesikhathi eside ngesisekelo sokuphuma noma i-hemodialysis eqhubekayo, kanye nasezigulini ezinenkinga yezinso (kufaka phakathi iziguli ezine-CC ezingaphansi kuka-30 ml / min / 1.73 m 2), ushintsho olukhulu ku-pharmacokinetics ye-moxifloxacin alitholakalanga. Umehluko obalulekile ekubandakanyekeni kwe-moxifloxacin ezigulini ezinenkinga yokusebenza kwesibindi (amakilasi A no-B ngokusho kwesilinganiso seNgane-Pugh) uma kuqhathaniswa neziguli ezinokusebenza okujwayelekile kwesibindi kanye namavolontiya anempilo nawo awekho.
Ngokusho kwemiyalo, i-Avelox 400 mg imiselwe:
Izinqubo zokutheleleka kwamaphaphu nezitho ze-ENT,
Izifo ze-Intraabdominal ne-urogenital,
Izifo ezithathelwanayo zezicubu ezithambile nesikhumba.
Umsebenzi we-Avelox ubonakaliswa maqondana nemikhakha ehlukahlukene yama-gram-positive ne-gram-negative, ama-bacteria alwa nama-beta-lactam kanye nama-macrolide antibiotic, ama-bacteria angavimbeli i-acid kanye nama-atypical ama-microorganisms, kanye nama-bacteria we-anaerobic amelana nemithi.
Imiyalo ye-Avelox ikhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwayo akwamukeleki ezifweni ezinjenge-pseudomembranous colitis kanye nokwehluleka kakhulu kwezinso. Kwenqatshelwe ukuphuza amaphilisi abesifazane abakhulelwe nababolekayo, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 ubudala nabantu abangabekezeleli noma yiziphi izingxenye zomuthi. Kudingeka ukuqapha ikakhulukazi lapho kunikezwa imithi ezigulini ezinezifo zesistimu yezinzwa ephakathi, kusikisela ukuthi kungenzeka ukuthi kubanjwe ngokuxinzayo. Izifo ezinjengokwehluleka kwesibindi, i-acute myocardial ischemia, bradycardia, hypokalemia nazo ziyisizathu sokuqapha ngokuqokwa kwe-Aveloks.
Imiyalo yokusebenzisa i-Avelox: indlela nomthamo
Ama -vellox angathathwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, noma ngabe ukudla kungakanani. Izibhebhe zigwinywe zigcwele, ngoba ubuqotho begobolondo labo alingephulwa. Ukuphila kwesidakamizwa kuyinqubo ende, ngakho-ke kwanele ukuthatha umuthi kanye ngosuku.
Umthamo wansuku zonke wokwelapha we-Avelox ngu-400 mg. Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, umuthi udonswa ngokushesha futhi cishe ngokuphelele. Izinga eliphezulu lomuthi esegazini ngemuva kokusetshenziswa okukodwa lubonwa ngemuva kwamahora we-0.5-4 kusukela esikhathini sokuphatha. Ukuthola isilinganiso se-moxifloxacin esitebeleni kwenzeka ngemuva kwezinsuku ezintathu zokusetshenziswa okujwayelekile.
Ukwelashwa kwe-infusion kwenziwa noma ekuqaleni kokwelashwa ngokudluliselwa kwesiguli ngokusetshenziswa kwe-Avelox ezibhebheni, noma kusetshenziswe kuze kululame.
Ngokuya ngesifo, isikhathi sokwelashwa siyizinsuku eziyi-7-10.
Ukuphendula okungafani kwenzeka kakhulu ngokwanele, ngokuya ngemithetho ye-dosing. I-Avelox ingadala imiphumela emibi elandelayo:
Ukucanuzelelwa kwenhliziyo, ukuhlanza, ubuhlungu besisu, ukunambitheka, ukuqaqanjelwa yisisu, uhudo,
Ukwanda kwenhliziyo, izinhlungu esifubeni, ukwanda kwegazi,
Isiyezi, ukuphazamiseka kokulala, ukudangala, ukukhathazeka, ukudideka, ubuthakathaka obujwayelekile,
Ubuhlungu emuva, izinhlungu emisipha kanye nokuhlangana, i-tendovaginitis, ukuqhuma kwe-tendon,
Ukulunywa, ukuqubuka kwesikhumba,
I-Hyperglycemia, i-hyperlipidemia, i-hyperuricemia,
Imala ejwayelekile, ukuvuvukala.
Okwamanje, kunemininingwane elinganiselwe mayelana ne-overdose ye-Avelox. Ngokusetshenziswa okukodwa kwesidakamizwa ku-umthamo ongafinyelela ku-1200 mg noma lapho ufakwa kumthamo ongadluli kuma-600 mg, akukho miphumela emibi eyalotshwa izinsuku eziyi-10.
Uma kwenzeka kweqa ngokweqile, kuyadingeka ukutadisha ngokucophelela isithombe somtholampilo wesimo sesiguli bese unquma ukwelashwa okubonakalayo okuhambisana nokuqapha i-ECG.
Ukudonswa kwekhabhoni ocushiwe ngokushesha ngemuva kokuphathwa ngomlomo kwe-moxifloxacin emzimbeni kuvame ukusiza ukugwema ukuvezwa ngokweqile kwesistimu uma kwenzeka ngokweqile.
Uma kunobuhlungu emalungeni noma emisipheni uma uthatha i-Avelox, umuthi uyakhanselwa ukuvimbela ukuqhuma kwe-tendon.
Ezigulini ezinesifo sokuwa, i-Avelox ingavusa ukubanjwa ngamandla.
Ngokukhula kwesifo sohudo esinzima ngenkathi uthatha i-Avelox, kuyakhanselwa.
Ukudla ama-antacid nama-enterosorbents, kanye nezidakamizwa ezibandakanya i-iron, i-aluminium ne-magnesium kufanele zenzeke ngezikhathi ezihlukile ne-Avelox, umehluko kufanele okungenani ube ngamahora ama-4.
I-Avelox ayisetshenziselwa ukwelapha izingane.
Ukusetshenziswa kwe-Avelox kungaholela ezinkingeni ezigulini lapho ushayela izimoto futhi wenza ezinye izinhlobo zemisebenzi ezingaba yingozi ezidinga ukwanda kokuqina kanye nokuphendula okusheshayo kwe-psychomotor, okubangelwa imiphumela emibi ethile yesidakamizwa (ukungaboni kahle, imiphumela emibi ohlelweni lwezinzwa oluyi-central).
Ukuphepha kokuphathwa kwe-moxifloxacin ngesikhathi sokukhulelwa akukasungulwa, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo kuyaphulwa. Amacala okulimala okuhlanganyelayo okuhlanganisiwe ezinganeni eziphuze ama-quinolones ayaziwa, kepha lo mphumela awutholakalanga esibelethweni ngesikhathi sokulashwa nabesifazane abakhulelwe yi-Avelox.
Izifundo zezilwane zikuqinisekisile ubuthi bokuzala kwe-moxifloxacin. Endabeni yabantu, ubungozi obunokubakhona be-Avelox buhlala buqondwa kabi.
I-Moxifloxacin, njengamanye ama-quinolones, ivusa ukulimala kwenhliziyo yamajoyina amakhulu ezilwaneni ezizalwe ngaphambi kwesikhathi. Ucwaningo lwe-preclinical lukhombisa ukuthi i-moxifloxacin, ekugxilweni okuncane, idlulela ubisi lwebele. Imininingwane yokusetshenziswa kwayo ezigulini ngesikhathi sokuqunjelwa ayitholakali, ngakho-ke, ukusetshenziswa kwayo ngesikhathi sokuncelisa ibele kuyaphulwa.
I-Avelox camera camera:
Ithebhulethi eyi-1 iqukethe i-moxifloxacin (ngesimo se-hydrochloride) - 400 mg
Ebhokisini 1 blister kuma-5 noma ama-7 ama-pcs., noma ebhokisini ama-2 ama-blks ama-5 ama-pcs.
Isixazululo sokufakwa kwe-Avelox:
Ibhodlela eli-1 liqukethe i-moxifloxacin (ngesimo se-hydrochloride) - 400 mg
ezinye izithako: i-sodium chloride, i-sodium hydroxide, i-hydrochloric acid, amanzi d / ne.
Ibhodlela le-250 ml -1 ebhokisini.
Iphakethe elilodwa liqukethe i-moxifloxacin (ngesimo se-hydrochloride) - 400 mg
I-250 ml - izikhwama ze-polyolefin (1) - izikhwama zepulasitiki ezilimele nge-foil (12) ebhokisini.
I-Moxifloxacin yisidakamizwa esilwa ne-bactericidal antibacterial enesibuko esikhulu sezenzo zochungechunge lwe-fluoroquinolone. Umphumela we-bactericidal womuthi ubangelwa ukuvimbela kwamagciwane ama-topoisomerases II no-IV, okuholela ekuphazamisweni kwe-biosynthesis ye-DNA yeseli elincane futhi, ngenxa yalokho, ekufeni kwamangqamuzana amancane. Ukugxila okuncane kwe-bactericidal yesidakamizwa ngokuvamile kuqhathaniswa nokugxila kwayo okuncane kokuvinjelwa.
Izindlela eziholela ekwakhiweni kokumelana kwama-penicillin, i-cephalosporins, ama-aminoglycosides, ama-macrolides kanye nama-tetracyclines awephuli umsebenzi we-antibacterial we-moxifloxacin.Akukho ukumelana kokuphambuka phakathi kwala maqembu emishanguzo ye-antibacterial kanye ne-moxifloxacin. Kuze kube manje, akukaze kube namacala wokuphikisana ne-plasmid. Imvamisa yokuthuthuka kokumelana incane kakhulu (10 7 - 10 10). Ukumelana ne-Moxifloxacin kukhula kancane ngokusebenzisa izinguquko eziningi. Ukuvezwa okuphindaphindiwe kwe-moxifloxacin kuma-microorganisms ekugxilweni okungaphansi kwenani eliphansi le-inhibitory (MIC) kuhambisana nokwanda okuncane kwe-MIC. Amacala okumelana kokuphambuka kuma-quinolones ayabonakala. Noma kunjalo, amanye ama-microorganisms wegram-positive ne-anaerobic amelana namanye ama-quinolones ahlala ezwela i-moxifloxacin.
I-in vitro moxifloxacin isebenza ngokuqhathanisa nemvelo enhlobonhlobo yama-gram-negative kanye nama-gram-positive, ama-anaerobes, ama-bacterium amelana ne-acid namafomu atypical, njenge-Mycoplasma, Chlamidia, Legionella, kanye namagciwane amelana nemithi elwa nama-ß-lactam nama-mafolid.
Yini esiza i-Avelox?
Izinkomba eziphambili zokuqokwa kwe-Avelox yilezi zimo / izifo ezilandelayo:
Ukuphepha kokusetshenziswa kwe-moxifloxacin ngesikhathi sokukhulelwa akukasungulwa futhi ukusetshenziswa kwayo kuphikisiwe. Amacala okulimala okuhlanganyelayo okuhlangene ezinganeni ezithola ama-quinolones ayachazwa, noma kunjalo, ukubonakaliswa kwalomphumela esibelethweni (lapho sisetshenziswa umama ngesikhathi sokukhulelwa) akubikwa.
Izifundo zezilwane zikhombise ubuthi bokuzala. Ingozi engaba khona kubantu ayaziwa.
Njengamanye ama-quinolones, i-moxifloxacin ibanga ukulimala kwethambo lamalunga amakhulu ezilwaneni ezingaphambi. Izifundo zangaphambi kokunye zithole ukuthi inani elincane le-moxifloxacin likhishwa ubisi lwebele. Idatha yokusetshenziswa kwayo kwabesifazane ngesikhathi sokuqunjelwa ayitholakali. Ngakho-ke, ukuqokwa kwe-moxifloxacin ngesikhathi sokuncelisa ibele kutshelwe.
Ngenhlanganisela ye-moxifloxacin ene-probenecid (ukungatholakali kokuxhumana okuphawuleka ngokwengqondo nesakhi esisebenzayo se-Avelox sekufakazisiwe), i-atenolol, i-morphine, i-ranitidine, i-digoxin, i-itraconazole, izithasiselo ezithinta i-calcium, i-glibenclamide, i-theophylline, inzalo yomlomo wesibeletho, i-cyclosporin ayidingekile.
Ngokusetshenziswa okuhlangene kwe-Avelox nezidakamizwa okuthinta ukwanda kwesikhathi sokuphumula kwe-QT, umphumela ongezekayo wokunweba isikhathi sokuphumula kwe-QT ungabonakala. Ngokuhlanganiswa kwe-moxifloxacin nezidakamizwa ezifanayo, ingozi yokuthuthuka kwe-ventricular arrhythmias, kufaka phakathi i-polymorphic ventricular tachycardia (torsade de pointes).
Ukuphathwa ngokubambisana kwe-moxifloxacin kanye nezidakamizwa ezilandelayo ezithinta ukwanda kwesikhathi sokuphumula kwe-QT ziyaphulwa:
antihistamines (misolastine, astemizole, terfenadine),
izidakamizwa ze-antiarrhythmic ze-class IA (disopyramides, hydroquinidine, quinidine, njll.),
izidakamizwa ze-antiarrhythmic zeklasi III (ibutilide, amiodarone, dofetilide, sotalol, njll.),
antimicrobials antimalarials, ikakhulukazi halofantrine, sparfloxacin, pentamidine, erythromycin (ukuphathwa kwe-intravenous),
ama-antipsychotic (i-suloprid, i-phenothiazine, i-haloperidol, i-sertindole, i-pimozide, njll.),
ezinye diphemanil, chisapride, bepridil, vincamine (ukuphathwa kwe-intravenous).
Ukuphathwa kanyekanye kwe-Avelox ngama-multivitamini, amaminerali kanye nama-antacid kungavimbela ukumuncwa kwe-moxifloxacin ngenxa yokwakheka kwezindawo ezihlafunwayo ezinamasenti ahlukahlukene ayingxenye yalemithi. Ngenxa yalokho, izinga le-moxifloxacin ku-plasma yegazi lingaphansi kakhulu kunokudingekile. Ngakho-ke, ama-antiretroviral (isb., Didanosine) namalungiselelo e-antacid kanye nezinye izidakamizwa ezibandakanya i-aluminium noma i-magnesium, kanye ne-sucralfate neminye izidakamizwa eziqukethe i-zinc noma i-iron, kunconywa ukuthi kuthathwe okungenani amahora ama-4 ngaphambi noma amahora ama-4 ngemuva ukuphathwa ngomlomo kwe-Avelox.
Ngokuhlanganiswa kwe-Avelox nge-warfarin, isikhathi se-prothrombin namanye amapharamitha we-coagulation wegazi ahlala engashintshiwe. Ezigulini eziphathwe ngama-anticoagulants ngokuhlanganiswa nama-antibiotics, amacala okunyuswa kwemisebenzi ye-anticoagulant yezidakamizwa ze-anticoagulant ayabonakala.
Izici zobungozi zibandakanya isimo esivamile nobudala besiguli, kanye nokuba khona kwesifo esithathelwanayo esihambisana nezinqubo zokuvuvukala. Naphezu kweqiniso lokuthi ukusebenzisana kwe-moxifloxacin ne-warfarin akukaze kufakazelwe kuze kube manje, iziguli ezithola ukwelashwa okuhlanganiswayo ngalezi zidakamizwa kufanele ziqaphele i-INR njalo uma kudingeka, zandise noma zinciphise umthamo we-anticoagulants engaqondile.
I-Digoxin ne-moxifloxacin empeleni azithinti amapharamitha we-pharmacokinetic womunye nomunye. Ngokuthulwa kwemithamo ephindaphindwe ye-Avelox, inani eliphakeme le-digoxin lenyuke cishe ngama-30%. Kulesi simo, inani eliphansi le-digoxin kanye nenani lendawo engaphansi kwe-pharmacokinetic ijika "okuhlushwa - isikhathi" empeleni alushintshile.
Ngokuphathwa kanyekanye komlomo kwe-moxifloxacin ku-400 mg futhi kusebenze namalahle, uhlelo lwe-bioavailability lwe-Avelox luyancipha ngamaphesenti angaphezu kwama-80 ngenxa yokuvinjwa kokufakwa kwalo. Uma kwenzeka kweqa ngokweqile, ukusetshenziswa kwekhabhoni ocushiwe ekuqaleni kokutholwa kuvimbela ukwanda okwengeziwe kokuchayeka okuhleliwe.
Ama-analogues we-Avelox entweni esebenzayo yilezi zidakamizwa ezilandelayo: i-Vigamox, Moximac, Moxin, Moxifloxacin, Moxifloxacin hydrochloride, Plevilox. I-subgroup efanayo ye-pharmacological ifaka phakathi: Abactal, Basigen, Gatispan, Geoflox, Zanocin, Xenaquin, uLeoflox, uNormax, u-Ofloxacin, u-Ciprofloxacin nabanye.
Ukubuyekezwa mayelana ne-Aveloks
Ukubuyekezwa mayelana ne-Avelox okushiywe ngochwepheshe kuyimpikiswano impela. Abanye odokotela bakubheka njenge-antibiotic eqinile futhi esebenzayo esisiza ukubhekana nomenzeli wezifo ezibangelwa izifo ezifana ne-chlamydia, i-pyelonephritis, umkhuhlane, i-SARS kanye ne-E. coli. Abanye ochwepheshe bathi ayikho imiphumela emihle yokwelashwa, kepha baphawula inani elikhulu lemiphumela emibi.
Imibono yeziguli nge-Avelox nayo ixubekile. Abantu abaningi basho leyo ndlela emibi yokusabela njengokwehla kwesifiso sokudla nesicanucanu. Kodwa-ke, iziguli eziningi zibheka njengesidakamizwa esiqinile nesisebenzayo se-antibacterial.
I-Avelox iyatholakala ngesimo samathebulethi kanye nesisombululo sokufakwa (hhayi ukujova). Zijwayeze ngokwakhiwa, incazelo nencazelo emfushane yezidakamizwa:
Pink, matte, oblong, camera-camera.
Oluketshezi oluphuzi oluhlaza okotshani.
Ukuhlushwa kwe-moxifloxacin, mg
400 ngebhodlela eli-1
I-titanium dioxide, i-microcrystalline cellulose, i-macrogol, i-croscarmellose sodium, i-iron ironide ebomvu, i-lactose monohydrate, i-hypromellose
Amanzi, i-sodium chloride, i-hydrochloric acid, isisombululo se-sodium hydroxide.
Amabhuzu ama-5 noma ama-7 ama-pcs., Amaphakethe we-1 noma ama-2 blisters.
Izilazi ezingama-250 ml noma iziqukathi.
Odokotela bavame ukunquma i-Avelox ye-angina, i-abscess, i-pneumonia, ngenxa yomphumela we-antibacterial, umuthi ubulala ama-causative agents alegciwane futhi unciphisa ukuvuvukala. Indlela yokufaka isicelo, irejimeni yemithamo kanye nobude besikhathi sokwelashwa kuncike ohlotsheni, ubukhulu besifo kanye nendlela yokuphuma komuthi. Amacwecwe athathwe ngomlomo, isisombululo singabazali, ngesimo se-infusions.
I-Avelox esezibhebheni ithathwa ngomlomo ku-400 mg 1 isikhathi / ngosuku. Amathebulethi awahlafuneki, ahlanzwa phansi ngoketshezi, kungakhathalekile ukuthi kudliwani. Ebudaleni, umthamo awuguquki. Isikhathi sokwelashwa kuya ngesifo:
Inkambo yokwelashwa ngezinsuku
Ukwanda kwe-bronchitis engapheli
I-pneumonia etholwe ngumphakathi ngemuva kwenkambo ye-Avelox infusions
Ukusetshenziswa kwe-intravenous, isisombululo segama elifanayo ku-400 mg kanye / ngosuku senzelwe. Ukwelashwa ngezidakamizwa kuhlala izinsuku ezingama-21. Nge-pneumonia etholwe ngumphakathi, ukwelashwa kuthatha izinsuku ezingama-7-14, ngezifo eziyinkimbinkimbi - izinsuku ezingama-7-21, izifo ezithinta i-intra-isisu - izinsuku ezingama-5-16. Kubantu asebekhulile kanye neziguli ezinenkinga yokusebenza kwesibindi, umthamo awuguquki.
Isixazululo sikhishwa ngokuhlinzwa ihora. Umuthi ungasetshenziswa nge-dilution ngamanzi, isixazululo sika-Ringer, i-sodium chloride, i-dextrose noma i-xylitol. Kusungulwa kuphela isixazululo esikhanyayo ngaphandle kwe-turbidity, sediment. Ngemuva kokuthambisa nge-sol sol, umuthi uzinza usuku lonke, inqobo nje uma ugcinwa endaweni yokushisa yasekamelweni.
Ukuphepha kokusetshenziswa kwe-moxifloxacin ngesikhathi sokukhulelwa akukasungulwa, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo kufakwa emgomeni. Izifundo kumagundane zikhombisa ubuthi bokuzala. Ezilwaneni, i-Moxifloxacin ibanga ukulimala kwethambo lamalunga amakhulu, afakwa ubisi lwebele, ngakho-ke ukwelashwa ukuncelisa ibele kuphambene.
I-Avelox ayikwazi ukusetshenziswa ebuntwaneni nasebusheni abangaphansi kweminyaka eyi-18. Lokhu kuhlotshaniswa nengozi ekhulayo yokusebenza kokulimazeka kwamalunga nama-cartilage. Ukuchayeka ngokweqile kakhulu ku-antibiotic kungaholela ekufiseni ubuthi, ukuthuthukiswa kwamaphaphu e-bullous, ukudangala nokudangala kohlelo lwezinzwa oluphakathi. Lokhu kuyingozi ikakhulukazi esemncane naphakathi kwezingane zesikole.
Ukugwema ubungozi bokuphazamiseka kwesibindi, isikhathi sokulashwa kwe-Avelox, kufanele wenqabe ukuphuza iziphuzo eziqukethe utshwala noma izidakamizwa. Ukusetshenziswa kotshwala kuphazamisa izitho zomzimba, kubangela ukudakwa ngokweqile kanye nokuphuza ngokweqile. I-Ethanol inciphisa ukusebenza kwomuthi, okuholela ekuphendukeni okunzima. Ungaqala futhi ukuyithatha inyanga ngemuva kokuphela kokwelashwa.
I-Avelox ithengiswa ngomuthi, igcinwa emazingeni okushisa afinyelela kuma-25 degrees amaphilisi namadigri ayi-15-30 ngesixazululo. Impilo eshalofini lamathebhulethi kanye nezinkomba zesisombululo yiminyaka emihlanu, ikhambi ezitsheni yiminyaka emithathu.
Ama-genetic anento efanayo esebenzayo futhi afaka enye ingxenye, kodwa ngomphumela ofanayo wesistimu, adluliselwa ku-Aveloks analogues. I-antimicrobial drug analogues:
I-Aquamox - isisombululo esisuselwa ku-moxifloxacin,
I-Moxifluor iyi-generic yomuthi okukhulunywa ngawo,
I-Megaflox - amaphilisi anesithako esifanayo esisebenzayo,
IHainemoks - ukulungiselela ithebhulethi, ukuqondisa i-analogue,
I-Moxifloxacin yisitolo esidume kakhulu sezidakamizwa.
Imiyalo esetshenzisiwe (Indlela nomthamo)
Amacwecwe athathwe ngaphandle kokuhlafuna noma ukwahlukanisa, kungakhathaleki isidlo.
Ngokusho kwemiyalo ye-Avelox 400 mg, kubantu abadala, umthamo wansuku zonke uyithebhulethi eyodwa noma i-400 mg ye-antibiotic.
Isikhathi nemodi yokuphatha kufanele inqunywe ngudokotela ohambelayo, kuya ngobucayi bokutheleleka, ukusebenza kwayo kanye nokuzwela kwesiguli.
Njengomthetho, ekuqaleni kokwelashwa, umuthi ubekiwe ngemijovo, khona-ke, ngemuva kokuqala kokuthuthuka, amaphilisi angabekwa.
Ngokukhuphuka ezingamahlalakhonai-bronchitis inkambo yokwelashwa nomuthi izinsuku eziyi-5. At inyumoniya - kusuka kwezi-7 (imijovo) kuya kwezinsuku eziyi-10.
At sinusitis oyingozi kanye nokutheleleka okulula kwesikhumba nezicubu, isikhathi sokuphathwa kwama-antibiotic isonto elilodwa.
Ngokutheleleka okulula kwezitho zomzimba we-pelvic, inkambo yokwelashwa isemavikini amabili.
Uma kwenzeka izifo eziyinkimbinkimbi zesikhumba nezakhiwo ngaphansi kwesikhumba, ukwelashwa kwenziwa ngokuhambahamba futhi kuthatha izinsuku ezingama-5 kuye emasontweni amabili.
Kubantu abanokulimazeleka kwe-renal kanye ne-hepatic function, asebekhulile, kanye nezinhlanga ezihlukile, ukulungiswa kwamthamo akwenziwa.
Imiyalo yokusebenzisa i-Avelox yomjovo
Sebenzisa isisombululo esikhanyayo kuphela, ngaphandle kokucacisa noma ukushuba kwefu.
Umuthi uphathwa ngaphakathi isikhathi eside, imizuzu engama-60, okungenani ngaphandle kokuhlonza. Kaningi imishanguzo ixubene ne I-adaptha ye-T namanzi okujova isodium chloride solution(0.9% noma 1M), isixazululo i-dextrose (5%, 10%, 40%), isixazululo xylitol 20%, Isixazululo sika-ringer. Ingxube elungiselelwe ingagcinwa emazingeni okushisa egumbi amahora angama-24.
Ku-syringe efanayo noma i-dropper, amanye ama-ejenti awaxubeki.
Kusho kahle nge i-atenolol, i-theophylline, amalungiselelo e-calcium, i-ranitidine, inzalo yokuvimbela inzalo ngomlomo, i-intraconazole, i-morphine, i-glibenclamide, i-digoxin, i-warfarin, i-phenenecid.
Noma kunjalo, lapho kuhlangene anticoagulants engaqondile kufanele icatshangwe futhi ihlolwe njalo INRlungisa kahle umthamo we-antibiotic.
Lapho kuhlangene ama-antacid, ama-multivitamini kwakhiwa amaminerali ehlafunwe Izakhiwo ezinamakhompiyutha ane-polyvalent, ukugcwala kwama-antibiotic egazini kuyancipha. Kulokhu, isikhathi sokuthatha amahora ama-4 phakathi kokuthatha izidakamizwa kumele sibhekwe.
Uma uhlanganisa umuthi ne-carbon ocushiwe noma abanye ama-enterosorbents, khona-ke i-bioavailability yesidakamizwa incishiswa kakhulu (cishe i-80%). Ngokuphathwa kwe-intravenous, leli nani lifinyelela ku-20%.
Isixazululo sokufakwa akumele siphathwe nge-10% no-20% sodium chloride, sodium hydrogencarbonate 4.2% no-8.4%.
Izifanekiselo eziseduzane ze-Avelox: Moxifloxacin-Farmex, Moxifloxacin, I-Moxifluor, UMoflox, I-Moxifloxacin-Credofarm, UMaxicin, Moxifluor 400, Moxin, Tevalox, Mofloxin Lupine.